Iyini i-solstice yasehlobo? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Iplanethi yethu, njengayo yonke eminye, izungeza yona futhi futhi izungeza inkanyezi yayo, kulokhu okuyiLanga. Njalo amahora emini ayashintsha, ancishisiwe noma andisiwe, kuya ngobude obubonakalayo benkanyezi yenkanyezi.
Ngasekupheleni kwesonto likaJuni, phakathi kuka-20 no-21, i-solstice yasehlobo yenzeka eNyakatho Nenkabazwe. Kwesinye isigamu somhlaba, eningizimu Nenkabazwe, lo mcimbi wenzeka phakathi kukaDisemba 20 no-21. Kepha, Kuyini ngempela futhi kungani kubaluleke kangaka?
1 Iyini incazelo yesolstice?
1.1 Iyini i-solstice yasehlobo?
1.2 Kungani i-solstice yasehlobo kungesona isikhathi esishisa kakhulu?
2 Ilukuluku mayelana nosuku olude kakhulu onyakeni
2.1 Uyini umsuka weFiesta de San Juan?
3 Inini i-solstice yasehlobo ngo-2017?
Iyini incazelo yesolstice?
Kuyaziwa ngokuthi yi-solstice isikhathi sonyaka lapho iLanga lidlula kwelinye lamaphuzu akude kakhulu kwi-ecliptic kusuka enkabazwe. Ngokwenza njalo, umehluko omkhulu kakhulu wesikhathi phakathi kwemini nobusuku uyanikezwa. Ngakho-ke, ngesikhathi solstice ehlobo usuku lude kakhulu, kanti i-solstice yasebusika iyona efushane kakhulu.
Ukuze sikuqonde kangcono, sizoqala ngokuchaza ukuthi yini i-ecliptic. Kanjalo. Njengoba sazi, ilanga liyinkanyezi ehlala ihleli esibhakabhakeni; Kodwa-ke, ngokombono wethu lapha eMhlabeni kubonakala sengathi empeleni kuhamba. Le ndlela ecatshangelwayo iLanga "elihamba ngayo" yaziwa njenge-ecliptic., okuwumugqa ohamba uzungeze umhlaba phakathi nonyaka. Lo mugqa ogobile wakhiwa yimpambana-mgwaqo yendiza yokuhamba komhlaba noMkhakha wasezulwini.
Lapho iLanga lifinyelela ukuphakama kwalo okuphezulu kakhulu okubonakala ngaphezu kweTropic of Cancer, ihlobo liqala eNyakatho Nenkabazwe; Ngakolunye uhlangothi, uma kwenzeka ngaphezulu kweTropic of Capricorn, khona-ke kuzoba seNingizimu Nenkabazwe lapho usuku luyoba lude khona. Inini i-solstice yasehlobo? ENyakatho Nenkabazwe kungoJuni 20 noma 21, kanti eNingizimu kunguDisemba 20 noma 21.
Kungani i-solstice yasehlobo kungesona isikhathi esishisa kakhulu?
Lokhu kuchaza ukuthi kungani yize iplanethi imbozwe ngamanzi angama-71% kuze kube phakathi nehlobo ngeke zibe khona izinsuku ezishisayo ikakhulukazi.
Ilukuluku mayelana nosuku olude kakhulu onyakeni
Lolu suku lulindelwe ngabaningi. Wusuku lapho ufuna ukuphuma uhlangane nabangane ukugubha ukuthi ihlobo selibuyile nokuthi kungekudala sizoba nesikhathi samahhala esingasizakala ngokunqamula futhi sizinikele kulokho esikuthanda kakhulu. Kepha, Uyazi ukuthi ligujwa kanjani?
I-solstice yasehlobo ibilokhu igujwa isikhathi eside, ngisho nangaphambi kokuba isintu siqale ukwakha izindlu njengoba sizazi namuhla. Kwakuwusuku lapho amandla nomlingo kwakuyizimbangi zangempela, ezizosebenza ukuzihlanza ngenkathi zibonga iLanga ngezitshalo, izithelo nangokwanda kwamahora emini.
EGibhithe lasendulo, ngokwesibonelo, ukuphuma kwenkanyezi uSirius kuqondane ne-solstice yasehlobo kanye nezikhukhula zaminyaka yonke zomfula eziqinisekisa ukuqhubeka kwazo: iNayile. Kubo kwakungukuqala konyaka omusha, ngoba kuphela lapho umfula usukhuphukile lapho babengakwazi ukutshala ukudla kwabo.
Uyini umsuka weFiesta de San Juan?
Lona ngomunye wemikhosi endala emhlabeni. Ukuthola imvelaphi ngqo kulahleka ngesikhathi. Eminyakeni edlule ILanga kukholakala ukuthi belithandana noMhlaba yingakho engafuni ukumshiya. Ngalesi sizathu, abantu babecabanga ukuthi kufanele banikeze amandla enkosini yelanga ngoJuni 23, futhi ngalokho okungcono kunokubasa umlilo.
Kodwa futhi, bekukholelwa ukuthi yisikhathi esihle kakhulu sokuxosha imimoya emibi nokuheha emihle. Yize kunjalo, ngokufika kobuKristu eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili eyedlule, lo mgubho walahlekelwa yinhle. Ngokwemibhalo engcwele, uZacarías wayala ukuba abase umlilo womlilo ukuze amemezele izihlobo zakhe ukuzalwa kwendodana yakhe uJuan Bautista, okwakuqondane nobusuku benkathi yelanga. Ukukhumbula lolo suku, AmaKrestu weNkathi Ephakathi abasa umlilo omkhulu futhi enza imicikilisho ehlukahlukene ukuzungeza.
Okwamanje uthatha ithuba lolo suku ukuhlangana nabangane olwandle, eduze nomlilo futhi ujabulele; yize kusekhona imicikilisho eqhubekayo, njengokugxuma kwamagagasi, ukudlula emlilweni ovuthayo noma ukugeza ukuze inhlanhla imamatheke kithi.
Inini i-solstice yasehlobo ngo-2017?
Okuthembisa ukuba ngolunye lwezinsuku ezikhetheke kakhulu onyakeni ka-2017, kuzoba yi NgoLwesithathu, ngoJuni 21 ngo-06: 24, okungukuthi, kuzoqondana nosuku olusemthethweni nokuqala kwenkathi yehlobo.
Futhi wena, uyazi ukuthi uzoligubha kanjani i-solstice yasehlobo?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Iyini i-solstice yasehlobo?